Fursada TOBBANKA Tababare Ee Shaqada Newcastle Ku Tartamaya Oo La Qiimeeyay, Macalinka 1-aad Galay & Kaalinta Zidane La Siiyay Oo Yaab Leh - Gool24.Net
Fursada TOBBANKA Tababare Ee Shaqada Newcastle Ku Tartamaya Oo La Qiimeeyay, Macalinka 1-aad Galay & Kaalinta Zidane La Siiyay Oo Yaab Leh
May 22, 2020 Apdihakem Omer Adem
Dalka sucuudiga gaar ahaan dhaxal sugaha boqortooyada dalkaas ee Mohamed Bin Salman ayaa la filayaa inuu la wareego mulkiyada kooxda Newcastle United iyadoo waliba wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in loo ansixiyay iibka kooxdaasi waxkastaana dhan yihiin.
Jamaahiirta Newcastle United ayaa filanaya in lacagta badan ee Mohamed Bin Salman ay kooxdooda ka caawin doonto inay si xor ah suuqa u gasho lacago badana kusoo bixiso ciyaartoy waaweyn.
Labada xiddig ee kala ah Gareth Bale iyo Philippe Coutinho ayaa ah ciyaartoyda waaweyn ee aadka loola xidhiidhinayo balse waxa sidoo kale jiri karta in tababare bedelis ay ka dhacdo kooxda.
Walow uu macalinka haatan ee Steve Bruce uu shaqo wanaagsan qabtay xilli ciyaareedkiisii koowaad ee kooxdaas haddana jagadiisa ayaa ah mid halis ku jirta iyadoo si aan kala go’ lahayn booskiisa loola xidhiidhinayo macalinkii Tottenham ee Mauricio Pochettino.
Haddaba, qiimayntii ugu dambaysay ee ay shirkadda Lardbrokes ku samaysay tobbanka tababare ee jagada kooxdaas qabsan kara ayuu hoggaaminayaa Pochettino oo helay fursad ah 10/11 sidaasna booska koowaad ku ah.
Wararka ayaa sheegaya in tababare Pochettino uu xilli horeba wadahadalo kula jiro shaqsiyaadka la wareegaya Newcastle United isla markaana uu bedelayo Bruce oo qandaraaskiisa ay laba sano ka hadheen.
Booska labaad ee qiimayntan ayuu galay tababarihii hore ee Newcastle ee Rafa Benitez kaas oo haatan horyaalka Chinese Super League ku sugan isagoo helay qiimayn 11/4 ah.
Arrinta yaabka leh ayaa ah in tababaraha Real Madrid ee Zinadine Zidane booska saddexaad laga soo galiyay qiimayntan isla markaana uu helay qiimayn ah 8/1.
Waxa jira warar xan ah oo sheegaya in Zidane uu Madrid iskaga tagi karo dhammaadka xilli ciyaareedka haddiiba qaybta dambe ee xilli ciyaareedku ay sidii la qorsheeyay u dhici weydo.
Halkan Kaga Boggo Liiska Oo Dhan & Qiimaynta Tababare Kasta